+35 छोटो प्रेम समर्पण तपाइँको साथी | स्वयं सहायता संसाधन
स्वयं सहायता पुस्तकहरू
छोटो प्रेम समर्पण
मारिया जोस रोल्डन | 12/04/2021 19:42 | वाक्यांशहरू
यदि तपाईं छोटो प्रेम समर्पणहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ। छोटो प्रेम समर्पण साना भालाहरू जस्ता छन् जुन सीधा घाउको सट्टामा, तिनीहरूले आत्मामा सिधा दुलही निम्त्याउँछन्। किन ती यति महत्त्वपूर्ण छन् यदि उनीहरू जान्दछन् कि कसरी आफूलाई विशेष समर्पित गर्ने विशेष व्यक्तिलाई जसले हामीलाई धेरै सास बनाउँछ।
सामान्यतया यस प्रकारको समर्पण जोडीका लागि प्रयोग गरिन्छ वा हामी मन पराउने कसैको मायामा पर्दछ तर जो अझै जोडी होईन। निस्सन्देह, तिनीहरू अर्को व्यक्तिको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन हामी विशेष विचार गर्दछौं यदि यो हाम्रो पार्टनर होइन भने, सीएक मित्रको रूपमा हामी धेरै माया गर्छौं र हामी हरेक पटक उनीहरूसँगै हुँदा हामी अद्भुत भावनाहरू महसुस गर्दछौं।
1 शब्दमा प्रेम
2 तिनीहरूलाई कसरी समर्पित गर्ने
3 छोटो प्रेम समर्पण जुन तपाईंलाई मनपर्दछ
प्रेम एक अद्भुत भावना हो जसले हामीलाई अर्को व्यक्तिको भावनाहरूको हड्ताल महसुस गराउँदछ। जब हामी शब्दहरु प्रेमको भावनामा राख्न चाहन्छौं, त्यसैले हामी के गरिरहेका छौं ती भावनाहरू निजीकृत गर्दैछौं जुन हामीले महसुस गर्छौं र तिनीहरूलाई इन्द्रिय दिन्छौं।
प्रेममा शब्दहरू राख्ने धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तै प्रेम पत्रहरू लेख्नु, वाक्यांशहरू साझा गर्नुहोस्, एक कलात्मक लेखन बनाउनुहोस्, एक प्रेम कार्ड पठाउनुहोस् ... र तपाईंछोटो प्रेम समर्पण पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
किनभने जब प्रेम प्रगाढ हुन्छ, समर्पण धेरै लामो हुनु हुँदैन। कहिलेकाँही, जब तिनीहरू छोटो हुन्छन् तर पोख्तमा, तिनीहरू पर्याप्त भन्दा बढी हुन्छन् ताकि अन्य व्यक्तिले तपाईंको लागि उनीहरूले महसुस गरेको महसुस महसुस गर्दछ।
तिनीहरूलाई कसरी समर्पित गर्ने
तपाईं अब देखि यी समर्पणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले बस आफूलाई सबैभन्दा मनपर्दो छनौट गर्नुपर्नेछ र ती व्यक्तिमा समर्पित गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई सबैभन्दा बढी प्रेम जगाउँछ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सरल छ, तपाईले सोच्नु भएको बाटोको बारेमा तपाईले सोच्नु पर्छ अर्को व्यक्तिको चकित होस् र यी सुन्दर शब्दहरूको मजा लिनुहोस् जुन तपाईं आफ्नो सबै प्रेमले समर्पण गर्नुहुन्छ।
तपाईं तिनीहरूलाई कागजको टुक्रामा सानो नोट लेखेर समर्पित गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को ठाउँमा पनी निश्चित रूपमा हेर्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। अर्को विचार सन्देश बाट समर्पण पठाउनु हो र तपाईं सँगै र खुशीको छवि संलग्न गर्नुहोस्।
तपाईं समर्पण संग एक व्हाट्सएप पनि लेख्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईं यसलाई कुनै पनि समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। वा अर्को व्यक्तिको हेर्न र प्रेम गर्न समर्पणको साथ छवि माउन्ट गर्नुहोस्। जे होस् यदि तपाईं सबैभन्दा साहसी व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई कानमा भन्न सक्नुहुन्छ जब तपाईंले यो देख्नुहुनेछ!
यसलाई समर्पित गर्ने तरिका तपाईंले सोच्नु पर्छ कि यो त्यस्तै हो एक जसले तपाईंलाई दुबैमा राम्रो सूट गर्दछ। जान्नुहोस् कि अर्को व्यक्तिले तपाईंलाई मनपर्दछ र तपाईंलाई यो गर्न सहज लाग्छ। एकचोटि तपाईंले निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले यो गर्नु पर्दछ ... र मायाको जादूले बाँकी काम गर्दछ!
छोटो प्रेम समर्पण जुन तपाईंलाई मनपर्दछ
यस बिन्दुमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले के समर्पित गर्नुपर्दछ र के तपाईं अभिव्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। केवल यस तरिकामा तपाईं विशेष व्यक्तिको लागि सही शब्दहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एक पटक जब तपाइँ एक भावनामा ठोस तरिकाले व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ भनेर जान्नुहोस्, तब तपाइँ यी सबै छोटो प्रेम समर्पण विकल्पहरूको बीचमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई सबैभन्दा मनपर्दछ (एक वा एक भन्दा बढी)। तिनीहरूलाई लेख्नुहोस् र उसलाई / उसलाई काम गर्न को लागी तपाइँको विशेष व्यक्तिको लागि समर्पित गर्न सक्षम हुन।
अर्को, विवरण हराउने छैन किनकि हामी तपाईंलाई केहि समर्पणहरू छोड्न लाग्दैछ जुन तपाईंलाई मनपर्दछ।
यदि तिमी मेरो मुटुमा शून्यता भर्छौ भने म तिमीलाई कसरी माया गर्न सक्दिन?
तपाईं मेरो अस्तित्वमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ; तपाई बिना केही पनि उस्तै हुँदैन।
तपाई बिना दु: खले मेरो हृदयलाई पूर्णरुपमा आक्रमण गर्न सक्थ्यो र यसलाई दु: खको समुद्रमा डुबायो।
म तिमीलाई हिजो भन्दा बढी र भोली भन्दा कम माया गर्छु।
मैले तपाईंलाई फेला पार्न समयको महासागर पार गरे।
प्रेम तपाईं जस्तै छ; छोटो तर गहन
तपाईं मेरो सबैभन्दा सुन्दर संयोग हो।
जे भए पनि यसले के लिन्छ, म तपाइँको सम्पूर्ण जीवनको लागि कुर्नेछु।
मैले कहिले पनि प्रेममा फस्ने सोचेको थिइनँ, तर तपाईं सँगै आउनुभयो र पेच मिलाउनुभयो।
कामदेवले मलाई एउटा तीर चलाए जुन म भित्र गए।
यस संसारमा केवल एक मात्र चीज गर्न मिल्दैन: तपाईंलाई माया गर्छु।
म ड्रग्सको लत छु ... तपाईको मायाको ड्रग।
मैले तिमीलाई भेटे सम्म प्रेममा कहिले पनि वाचा हुने छैन।
चंद्रमा वा कुना स्टोरमा यात्रा गर्नुहोस्, तर तपाईंसँग।
तिम्रो मुस्कानले मेरो सबै दु: ख हटाउँछ।
तपाईंको चुम्बनहरू कडा दिन पछि मेरो सबैभन्दा ठूलो खजाना हुन्।
हाम्रो सम्बन्धको कुनै भविष्य छैन, त्यसैले मैले समय बन्द गरें।
यो सबै "नमस्कार" को साथ शुरू भयो, त्यसपछि शब्दहरूको आदानप्रदान भयो, र अब हामी एकै खाटमा सुतिरहेका छौं, हरेक बिहान सँगै उठेर।
मँ आज राती चाहान्छु, र तपाई मात्र मलाई दिन सक्नुहुन्छ: यो "a" बाट सुरु हुन्छ र "मोर" बाट समाप्त हुन्छ।
केवल यस चीजको लागि म यो जीवन तपाईको साथ बाँच्न चाहान्छु।
के म सबैभन्दा बढि यो जीवन मा चाहान्छु तपाईंको छेउमा पुरानो हुनुहोस्।
उही क्षण जुन तपाईं मलाई "म तिमीलाई माया गर्छु" भन्छु म तिमीलाई मेरो प्राण दिनेछु र सारा संसार।
म तपाईंको छेउमा राम्रो र नराम्रो बाट यात्रा गर्छु।
यो राम्रो हुन सक्छ, तर तपाईं यो सही गर्नुभयो।
यदि मलाई थाहा छ प्रेम के हो, यो तपाईंलाई धन्यवाद छ।
माया गर्नु भनेको अर्कोको खुशीमा तपाईको खुशी खोज्नु हो।
प्रेममा सँधै पागलपन हुन्छ, पागलपनमा सधैं साना कारण पनि हुन्छ।
यो प्रेम गर्न पागलपन हो, जबसम्म तपाईं पागलपन आफूलाई माया गर्नुहुन्न।
प्रेम कथाहरू संसारका सबै रहस्यहरू छन्।
कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ कि पागल जस्तो देखिन्छ, जीवनको सर्वश्रेष्ठ चीजमा परिणत हुन्छ।
तपाईं मसँग सुत्नुहुने ठाउँबाहेक अरू कुनै जादुई ठाउँ छैन।
किनकि म तिमीलाई माया गर्छु? किनकि ममा केहि परिवर्तन गर्न नचाहिने गरी, तपाईं सबै कुरा परिवर्तन गर्न आउनुभयो।
म स्वार्थी छु र म यसको सहयोग गर्न सक्दिन। म तपाईलाई केवल मेरो लागि मात्र चाहान्छु, र म तपाईको दिमागमा केवल मेरो उपस्थित हुन चाहान्छु।
तिम्रो छाती मेरो हृदयको लागि पर्याप्त छ, मेरा पखेटा तिम्रो स्वतन्त्रताको लागि पर्याप्त छ।
म तिमीलाई मेरो लागि चाहन्न, म तपाईंसँगै चाहन्छु। फरक छ।
तपाइँसँग हुनु वा नहुनु मेरो समयको मापन हो।
प्रेम पूर्ण हुनु आवश्यक छैन। यो सिर्फ सत्य हुनु पर्छ।
यहाँ हामी सपनाहरु, भोली, ती जो शब्दहरु को शक्ति मा विश्वास गर्छन्।
कसैलाई माया गर्नु भनेको उनीहरूको सबै जादू देख्न सक्षम हुनु र तिनीहरूले यो बिर्सदा यो सम्झना गराउँदछ।
निश्चित रूपमा तपाईंले उत्तम प्रेम समर्पण फेला पार्नुभयो!
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » छोटो प्रेम समर्पण
म स्वीकार गर्दछु गोपनीयता सर्तहरू
Phrases० वाक्यांश ईर्ष्याको बारेमा
यात्रा गर्न मन पराउनेहरूका लागि पदावली
आत्म सुधार, व्यक्तिगत विकास र मनोविज्ञान मा नवीनतम लेख प्राप्त गर्नुहोस्।